N-Daahir • August 19, 2013 at 8:13 waxaan ahay • Reply
James 1:13, “Midna yuu odhanin kolkii la jirrabo, “Layga jirrabay by Ilaah”; Waayo, Ilaah laguma jirrabo shar, wuuna ma jirrabin qof.”
Ebube_nwadiei • August 19, 2013 at 8:13 waxaan ahay • Reply
Taasi waa waxa aan soo socda oo ku saabsan halkan, in la yidhaahdo. Ilaah ma jirrabaadda ha u isticmaalin, laakiin waxa uu na ka samatabbixin doonaa haddii aan ku weydiino.
si qarsoodi ah • August 19, 2013 at 8:14 waxaan ahay • Reply
Waxa uu cadeeyay in uu yahay sinaba uma leh in ay tahay, Ilaah waa kan ina laakiinse Shayddaan jirrabo, aduunka, oo xagga jidhka. Markaasaa Ruuxii Ilaah wuxuu Ciise keentay in laydin jirrabo sabab gaar ah. Ilaah wuxuu isticmaalaa jirrabaad walba, guuleystaan ​​jirrabaaddo ah, oo ah xataa dembiyadooda aan samayn, waayo, Ammaantiisu.
BPro_12 • August 19, 2013 at 8:15 waxaan ahay • Reply
@ N-Tahir @Ebube_nwadiei Fadlan mar kale dhageeystaan ​​khudbada oo dhan. Safarka aan la leh in Ilaah ina jirrabo. Waxa uu si fudud u sheegay in Ilaah u saamaxdaa. Ilaah wuxuu u ogolaanayaa laga yaabaa in aan si samray dhex by isaga isku halleeya. Haddii aan dooranno in aan jiifsaday hawadooda our anaani Ilaah hortiisa iyo is dhiibaan si doonistiisa, sabab u noqon doontaa xiriir fiican isaga la, taas oo ugu dambeyntii waa waxa uu doonayo nala. Waa maxay sababta kale oo uu wax ku soo diri doono ugu muhiimsan isaga u, Wiilka uu aad u, si ay u dhintaan on iskutallaabta a wax isagu ma uu samayn?
Nathaniel Babalola • August 19, 2013 at 8:15 waxaan ahay • Reply
Sida xaqiiqda ah. Laakiin Ilaah imtixaanka na ay, sida uu ku sameeyey Ibraahim. Ibraahim waxa uu ahaa ma jirrabo laakiin waxa uu la baadhay